Ikhasi lasekhaya - UDavid Warin Solomons 'Catalogue yoMculo
Kwiminyaka eyi-50 edluleyo ndibhale malunga neengqungquthela ze-4,800 kunye namalungiselelo - i-lyrical, tonal, neo-classical, modal, funny, satirical, inkolo, inomdla kwaye ibuhlungu - kubaculi beentlobo ezininzi.
Le khathalogi inenjongo yokukunceda ukuba ufumane nayiphi na into onokuyifuna, nokuba ngaba ngabadlali, impresarios okanye abaphulaphuli.
Nceda ujonge, kwaye wabelane!
Kwezinye iividiyo, ii-audios kunye neencwadi-kunye nomculo ngabahlobo bam abaninzi bomqambi - nceda ukhangele Links iphepha
Entsha: IKrismesi (kunye neminye imikhosi yasebusika) iphepha
Entsha: I-ABC encinci yeRenaissance iphepha
Okwangoku, zilapha iividiyo ezimbalwa:
KuCassandra kwi-cellos 8
Esi sisixhobo esandisiweyo sokwenza isigama sam sokuguqulelwa kukatata ngombongo kaRonsard "A Cassandre"
Yenziwe yiBellapest Scoring Cellos
Darling, woza ubone i-rose ebomvu,
Ngaloo nto yayisasazeka ngalo mva
Ingubo yakhe kwiso lusuku.
Yiza ubone ukuba ulahlekelwe yile
Isambatho sakhe esiqhenqcekileyo sambethe i-sheen,
Okokugqithisa okufanayo kwisantya sakho.
Wayengumthandi kunye nentsimbi yakhe - i-madrigal yanamhlanje - kwi-choir ye-SATB
Ingoma ye Shakespeare ngegama elifanayo kodwa usebenzisa iBell Dance njengomculo wokumela iifowuni. Abantu abahle beedolophu bahamba behamba kwi-supermarket aisles bexubana ngomnye nomnye kwiifowuni zabo eziphathekayo endaweni yezolimo eziluhlaza ze-Shakespeare yasekuqaleni. Yenzelwa apha yiChoir Composer phantsi kukaDaniel Shaw.
Im schönsten Wiesengrunde - igulane, viola kunye negarita
I sixhobo (4,295)
Iimpepha ze-Wind Trios IiTxtnet kunye neeNtshontshi (363)
Ezinye iimoya zomoya (30)
IiKhowudi eziPhupha (46)
Iibhodi zekhibhodi (241)
I-Guitar kwezinye izinto (196)
Guitar and Flute (308)
Imisebenzi yeCocal and Choral (594)
La Folia Utshintsho (15)
Amacandelo amancinci (151)
Abavela kwiSolo Voice neGititar (132)